Compress mapikicha- Compress akawanda jpg online online / offline
Yepamberi Mufananidzo compressor
Gonesa saizi yemufananidzo uye mhando yemifananidzo isingaenderani uye pamhepo uchishandisa yepamusoro jpg mufananidzo compressor.
*Iwe unogona kuwedzera gumi mifananidzo yekumanikidza.
Sei kumanikidza mifananidzo?
Dzvanya Wedzera Faira kuwedzera mafaera. Unogona kuwedzera mafaira asingagumi.
Dzvanya Start Compress kutanga compression algorithm kuti uderedze saizi yemufananidzo wakadzvanywa. Dzvanya kukanzura kuti umire.
Dzvanya Dhawunirodha kurodha pasi yako yakatsikirirwa jpeg / yakadzvanywa png kana yakadzvanywa mufananidzo kana mifananidzo.
Unogona kumanikidza JPG, GIF, PNG ine mhando yepamusoro. Deredza kukura kweJPG, GIF, uye PNG munzvimbo imwe.
Kumanikidza kwemufananidzo kunoshanda sei?
Mifananidzo yako ye-smartphone inotora yakawanda yekuchengetedza nzvimbo. Heano maitiro ekuti isu tigone kudzikisira ivo.
Ichi chishandiso chinodzora saizi yemifananidzo nekuongorora pixel imwe neimwe. Nedu bvunzo, iyo saizi yekudzora saizi kubva pamifananidzo yakajairwa yakasara iri pakati pe20% uye 85%. Iyo compressor yemufananidzo chirongwa chekumanikidza uye kuyera saizi mapikicha edhijitari, pamwe nekutarisira zvakanyanya ako emadhijitari mapikicha kuchengetedza yako chaiyo yemifananidzo mhando. Compressors edu anosanganisira akasikwa akagadzirwa epamberi mapikicha ekurasikirwa nekusvina injini uye tekinoroji
Heino muenzaniso wekuti mashandisiro aya anozokutendera iwe kudzikisa saizi yemifananidzo.
Uyu unongova muenzaniso mufananidzo wekukuratidza kuti mifananidzo yako yakagadziridzwa zvakadii.
pikicha compress ndiyo yekutanga webhu kunyorera.
dzvanya mapikicha pamhepo uye isinga tsanangurike iri yakapusa uye ine simba mufananidzo compression application. Iko kunyorera kunokutendera iwe kumanikidza mifananidzo mune zvidiki saizi mapikicha nekurasikirwa kwemhando kana kushandisa kurasikirwa kwekumanikidza. Iwe unogona kuisa iyo application pane chako chishandiso uye woishandisa is offline. Unogona kuisa ichi chishandiso pane ako Windows / Android / Apple / Linux zvishandiso. Ichi chishandiso chemahara application chausingade kubhadhara chero rudzi rwemari. Kumanikidza mifananidzo yako nechishandiso chedu ndiyo nzira yakapusa yekuona kuti mifananidzo yako yakareruka, kurumidza kurodha uye kugadzirira-kugadzirira. Maitiro ekumanikidza ese Mifananidzo mune PowerPoint mharidzo. Yedu yekugadzirisa mifananidzo application inogona kukubatsira iwe kushandura jpg faira compressor pamhepo mahara kana kushandura saizi mifananidzo kana kudzikisa saizi ye jpg.
Zvinopfuura miriyoni imwe kurodha pasi, kudzvinyirira kunyorera ndeimwe yeanonyanya kufarirwa software optimization software inowanikwa paInternet kana kunze kweinternet. Tiri kubatsira mamirioni evapikicha vemifananidzo, mabloggi, varidzi vewebhu, mabhizinesi, kana vashandisi vasina kujaira pakuchengeta, kutumira, uye kugovana mifananidzo yedhijitari. Kunyorera kunyorera uye kunongedza zvakare mifananidzo zvakanyanya, zvichiibvumira kuti igadzirise mafaera emifananidzo isina kuchinja resolution kana kurasikirwa muhunhu. Tiri kuyedza kushandisa AI kudzikisa saizi yemifananidzo, senge paHBO's Silicon Valley. Iyi Anwendung ichaita kuti mifananidzo yako ikurumidze kutakurika pane inononoka internet kubatana.